Hein Htet Kyaw – Page2– Hein Htet Kyaw
နည်းပညာ May 13, 2018
ရှာလေတွေ့လေပေါ့လေ :3 စောစောကတွေ့ခဲ့ရင် အကောင်းသား အခုတော့ နောက်ကျသွားပြီပေါ့လေ။ ၂ ခါမောရအုံးမယ် xD !! Linux သုံးပြီးတော့ HDD ကို External HDD အဖြစ် Data Backup လောက်ပဲလုပ်ပါတော့မယ်လေဆိုပြီးတော့ Data တွေ သိမ်းထားခဲ့တယ်ပေါ့လေ … အစပိုင်းမှာတော့ တိုင်မပတ်ဘူး :3 ဖြစ်ချင်တော့ တစ်နေ့မှာပဲ ကသစ်က Blu-ray Movie တွေရှိတယ် ယူမလားဆိုပြီးပြောတော့ ယူမယ်ဆိုပြီး အားရပါးရသွားလိုက်ကောပေါ့လေ :3 Copy ကူးမယ်လဲလုပ်ကော၊ ။ FAT 32 ဖြစ်နေတော့4GB Or Large File တွေ ကူးမရဘူးဖြစ်နေတယ် OMG !!! Fat 32 ဟာ Linux တွေမှာအသုံးပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် … Window လိုမျိုးနေရာပဲဖြစ်ဖြစ် File Storage အဖြစ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်တော့ တိုင်ပတ်တော့တာပေါ့လေ။ NTFS အကြောင်းနဲ့ FAT 32 အကြောင်းကိုတော့ Wikipedia မှာဖတ်ကြည့်လိုက်ပေါ့လေ !! File တွေကို တစ်နေရာမှာ…
Website Showcase April 27, 2018
Facebook သုံးပြီး အချိန်ဖြုန်းနေမယ့် အစားတစ်ခုခုလုပ်သင့်တယ်ထင်တာနဲ့ပဲ Forum လေးရေးကြည့်နေတယ်ပေါ့လေ xD Forum ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ Facebook သုံးပြီး အလကား စောက်ပေါတွေနဲ့ မနေချင်တာကြောင့် သီးသန့် သဘောမျိုးနဲ့ Knowledge Sharing လုပ်ကြမလားပေါ့လေ။ Short to the point ဖြစ်မယ်၊ အခက်အခဲရှိရင် ချက်ခြင်း ဖြေရှင်းနိုင်မယ်ပေါ့ ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လုပ်ချင်တာပေါ့လေ။ ဖြစ်ချင်တော့ Unicode နဲ့ Zawgyi ဆိုပြီးတော့ နှစ်ခြမ်းကွဲနေပြန်တယ် -,- ( Thank God ) လုပ်ဖြစ်ရင်တော့ Unicode သီးသန့်ပဲသုံးစေချင်တယ်ပေါ့လေ။ ဆိုပေမယ့်လဲ ယူနီကုဒ် သီးသန့်ဆိုရင် Active Member တွေကမရှိသလောက်ရှားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် သဲထဲရေသွန်သလိုဖြစ်ရမယ် … ဒါကြောင့်လဲ Can’t online လို့ပြောတာပေါ့ :3 Active Member မရှိ Staff တွေမရှိပဲနဲ့တော့ Online က Active ဖြစ်မလာနိုင်ဘူး။ ရှိပြီးသားဟာတွေတောင် သေသလိုဖြစ်နေတာဆိုလေတော့လဲ အပျော်သဘောနဲ့ပဲ Bill ကုန်ခံပြီး Error တွေရှင်းလိုက် ရေးလိုက်…
ထွေရာလေးပါး April 25, 2018
ရေးချင်တာကိုရေးရတာ သဘောကျတယ်ဆိုပေမယ့် စောက်တောသားတွေက ဘာတွေရေးရေးတင်မှန်းမသိဘူးလို့ လာလာပြောတာကို ဖြေရှင်းရတာကိုတော့ မုန်းတယ် :3 အဓိက ကတော့ Facebook ပေါ်မှာ ရေးချင်တာရေးနေရတာကိုသဘောကျတာကိုပြောတာပေါ့လေ။ အခန်းထဲမှာ တစ်ယောက်ထဲ တစ်နေကုန် ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ဘဝအတွက်ကတော့ Facebook ကို သူငယ်ချင်းလုပ်ပြီး ရေးချင်တာကို ရေးတယ် Comment ပေးချင်တာကိုပေးတယ် ( ဒီကြားထဲ ကိုယ့် Comment Reply မပြန်တာတို့ ဖျက်လိုက်တာတို့ဆို မှတ်ထားတယ် တစ်သက်လုံးသွားပြီး Comment မလုပ်တော့ဘူး :3 ) ဆိုတော့ အခန်းထဲ တစ်ယောက်ထဲနေရတာက သက်သာတယ်လို့ခံစားရတယ်။ သူငယ်ချင်းဆိုသည်မှာလဲ ကိုယ်နဲ့ ပေါင်းလို့သင်းလို့ရတဲ့လူတွေက အနားမှာမရှိကြဘူးဆိုတော့ တစ်နေ့ တစ်နေ့ အရမ်းကိုပျင်းဖို့ကောင်းလွန်းတာဆိုတော့ Facebook ပေါ်မှာ ရေးချင်တာကိုရေးလိုက်တယ် ပြောချင်တာကိုပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ ပျင်းလဲမပျင်းတော့ဘူး ထင်မိသလို အပျင်းပြေသွားတယ်လို့လဲ ထင်တယ် :3 ကိုယ်နဲ့ပေါင်းလို့ရတဲ့ သူငယ်ချင်းဆိုတာကလဲ ကိုယ်အရမ်းဆိုးတာကိုခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့လူမျိုး ၁၀ ယောက်မပြည့်ဘူး :3 အကုန်လုံးကလဲ Online ပေါ်မှာ ခင်ကြတာဆိုတော့ကာ … တစ်ယောက်တစ်နေရာမှာမလို့ အလည်သွားရအောင်ကလဲ မသက်သာတဲ့အဖြစ်ဆိုတော့ အခန်းထဲ တစ်ယောက်ထဲဆိုမှ တစ်ယောက်ထဲဘဝမှာ ရေးချင်တာကို…
အစကတော့ bootstrap4ရဲ့ Local documentation ကို offline ကြည့်လို့ရအောင် သွင်းလိုက်ရင်းကနေပြီး တက်လိုက်တဲ့ Error တွေဆိုတာ နည်းနည်းနောနောမှမဟုတ်တာကို :3 ဘာကြောင့်တက်တယ်တော့မသိဘူးဆိုပေမယ့် … တက်သမျှ ဒိုင်ခံရှင်းနေရတယ် ( ပိုက်ဆံလဲ လွှတ်ကုန်ကောပဲ – ဒီထဲက ဗဟုသုတလေးကတော့ ရခဲ့တာပေါ့လေ ) အဓိက ကတော့ Window သုံးနေလို့လဲပါမယ် :3 lib တော်တော်များများက Linux မှာပဲကောင်းကောင်းလုပ်ကြတာကို။ Window သုံးတဲ့ Developer ဆိုတာကလဲ အတော်ရှားပြီး Linux အတွက် ဦးစားပေးရတဲ့ Dev တွေက များတာကိုလို့ အဲဒါကိုထားတော့။ ဖြစ်ပြီးပြီဆိုတော့ ရှင်းကြတာပေါ့ :3 * Requirements x) nodejs x) gem (Ruby) x) bundler Window မှာ ခုပြန်သွင်းတော့လဲ အဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုပေမယ့် ကျွန်တော် Bash on Ubuntu on Windows မှာတော့ အတော်တိုင်ပတ်သွားခဲ့ရတယ် :3 ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ Error…